Akukhona nje ukuthi isifo kubangela ukwesaba umuntu onamandla kangaka phakathi kwabantu, ezifana nomdlavuza. Futhi akumangalisi, ngoba isifo liyabulala, kanye nokwelashwa eqolo. Eminyakeni yamuva, yesayensi nezokwelapha kakhulu isihambile ukuthuthukiswa, ukuziqambela imikhiqizo emisha kanye nezindlela umzabalazo wokulwa nomdlavuza, kodwa Cancer uphethwe namanje kuzwakala isigwebo sentambo. Into embi kakhulu wukuthi sonke sibhekana kusukela lesi sifo.
Indawo ekhethekile phakathi zomdlavuza kwabesifazane ubambe izimila kule ipheshana wokugaya ukudla. Kubandakanya umdlavuza emathunjini, izimpawu zabo kuqala azibonakali cishe. Njengoba isifo iqala, futhi lena ekulandulayo ukubonakala isimila? Yini odokotela bethi, nendlela kuyingozi? Asivume.
umzimba wethu yakhiwa inqwaba amaseli ezincane ezingabonakali imisebenzi ethize. Ngokuvamile, amaseli ehlukana, zwa phoqoka yodwa, futhi esikhundleni ukuthuthukisa entsha. Ngokwesibonelo, esiswini olusha njalo ezinsukwini ezingu-4, okungukuthi inqubo ngokuphelele evamile.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ngaphansi kwethonya yezizathu ezithile, amanye amaseli baqale ukuhlukanisa i isivinini kwesivamile, kangangokuthi umzimba ngeke esakwazi ukulawula futhi siqaphele kubo liyaphela. njengoba enjalo ayikho nazo.
Kodwa into embi kakhulu la mangqamuzana elalisanda kumiswa abafi njengoba kufanele, futhi baqhubeke bephila futhi ukuzalela on. Lona uhlobo ezithile nezimila, ukutadisha Oncology.
Umdlavuza emathunjini amancane
Ngo umdlavuza emathunjini amancane kuthintwa izicubu yezindlala emathunjini bese mucosa yayo. Ngakho kukhona isimila bukhule ngokuhamba kwesikhathi bese engena ezithweni eduze. Maye, umdlavuza colon, izimpawu kanye nemiphumela zazo abonakala kuphela 3-4 izigaba, is esiyingozi kakhulu emzimbeni, bese ubone kuyo ekuqaleni isifo akulula.
Ngokwezibalo, umdlavuza encane wamathumbu kukalutshwana kakhulu. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zomdlavuza, lesi sifo sithinta bengekho ngaphezu kwama-2% zabasiza abathile abanomdlavuza. 80% zomdlavuza encane wamathumbu Nokho zenzeka kwasebekhulile, kanye asele 20% abantu abasha - kungcono kakhulu.
Ngo abesifazane, lolu hlobo lomdlavuza ezingavamile kakhulu. Okuvame kakhulu lesi sifo amadoda amadala, ogama ubudala kakade selingaphezu kwezigidi unyaka 60. Izizathu zalokhu mkhuba uhlala akucacile, mhlawumbe nakhu izici umzimba wentombi.
Izinhlobo izimila emathunjini amancane
Umdlavuza emathunjini amancane kungenzeka ngesimo:
Lomdlavuza oluvamile kakhulu emathunjini amancane, izimpawu ukuthi azibonakali kuphela emva kwesikhathi esithize, kungavuka ngesimo adenocarcinoma, okuyinto ukulahlekelwa nezicubu yezindlala emathunjini. Kartsenoid ivelakancane, lokulandisa mayelana 3% zomdlavuza.
Ngokuvamile lesi sifo sithinta abantu basemazweni asathuthuka bahlala ngokungaphili Asian. Emazweni athuthukile lungaphezu bungavami umdlavuza wamathumbu kwabesifazane - izibalo zithi Ezimweni ezinjalo kuyagcinwa kuphela phakathi asebekhulile.
Umdlavuza - isifo kunalokho kunganakekile, ngakho kusaqalwa ngokwakho cishe alibonisi. Kuze kube unyaka owodwa isiguli angeke awubone izinguquko emzimbeni. Izimpawu ziqala ukuvela lapho isimila liye lasakazekela kwezitho eduze. Izimpawu umdlavuza kapopopo e abesifazane yilezi:
• Izinkinga wamathumbu wabonakaliswa ukuvuvukala, isimiso, ubuhlungu besisu futhi sezinyawo sifo.
• Causeless kwesisindo. Uma une umdlavuza wamathumbu - izimpawu zokuqala engaveza kuyo ongaziwa kwesisindo.
• Yellowing kwesikhumba namaprotheni.
• Ukungakuthandi ukudla.
• Ukopha esiswini, kuba impela ezingavamile, ne Sarcoma.
Lezi izimpawu zibonisa ukuthi kufanele uvakashele ngokushesha udokotela kanye kudlule bonke ukuhlolwa ezidingekayo. Izimpawu umdlavuza kapopopo kwabesifazane kusaqalwa wabonakaliswa okuqukethwe esincishisiwe elithwala umoya-mpilo egazini kanye umsebenzi kwesibindi kwezinso. Nokho, izici ezifana zitholakala kuphela umphumela cwaningo.
Isiteji umdlavuza emathunjini amancane
Umdlavuza, isimiso, kuyinqubo eside futhi eziyinkimbinkimbi ukuthi egcina izigaba eziningana ukuthuthukiswa. Isigaba ngasinye has umehluko ayo isici. Sekukonke kukhona 4.
Isigaba 1. Lena esigabeni sokuqala lesi sifo, okuyinto Uthatha isikhathi eside. Enkathini ecishe ibe yiminyaka engamashumi 5, isimila ekhula 2 cm ububanzi futhi ongakabi lasakazekela-lymph kanye izitho eseduze.
Isinyathelo 2. usayizi isimila idlula 2 cm futhi liye lasakazekela engeyokuqala lymph. Kulesi sigaba lomdlavuza usewusana emathunjini amancane, izimpawu abangazange okwamanje wabonakaliswa ngokugcwele.
Isinyathelo 3. Libhekene ifomu ezinkulu emathunjini bese lymph node metastases. Kulesi sigaba, umdlavuza kuba yingozi kakhulu, futhi kuba nzima ukwelapha isiguli.
Isinyathelo 4. Ithumba uye wathuthela izitho eseduze futhi inani elikhulu metastases. amangqamuzana anomdlavuza uhlukanise ngejubane wafutheka, isifo siqhubeka uqobo.
Ingozi iba ukuthi ezimbili izigaba lokuqala umuntu engazizwa ushintsho empilweni yakho. Umdlavuza kulezi zifo ihlonzwe phakathi nokuhlinzwa kuphela noma esebenzisa-X-ray.
Izimbangela umdlavuza emathunjini amancane
Ngenxa yezizathu ukuthi kuphakamisa isifo zihlanganisa:
• ukusebenzisa kabi utshwala nokubhema;
• ukusetshenziswa njalo ukudla umdlavuza;
• ezingamahlalakhona izinqubo ukuvuvukala emathunjini;
• izilonda emathunjini;
• isifo Crohn;
• yesifo celiac;
• Peutz-Yegersa syndrome;
• izinqubo sokugembula encikene nokukhiqizwa enzyme yokusetshenziswa pheshana emathunjini;
• izifo ezibangelwa ufuzo;
• metastases ukuze emathunjini amancane.
Iqembu ingozi siqukethe abantu abaye ngaphambili wahlushwa umdlavuza, nabantu abangasithandi zofuzo beyizidlova umdlavuza, kanye njengoba sekuphawuliwe kakade, asebekhulile.
Sifo Kwenziwa ngokusebenzisa izindlela ezihlukahlukene usebenzisa imishini ekhethekile. Izimpawu umdlavuza kapopopo e abesifazane kusaqalwa kungenziwa wabonakaliswa pallor yesikhumba, kubangelwa elithwala umoya-mpilo ephansi. Isimila kungenziwa kuphela ukutholwa ultrasound. Assays zingase zibonise ukuphambuka kancane kusukela uthola igazi leukocyte.
Ngo izigaba kamuva, umdlavuza kungatholakala by palpation. It libhekene ifomu engalingani, futhi ingase ithathe ngesimo Izilonda flat noma inkomishi emise. Ngokuvamile, umdlavuza ukutholwa palpation, sise esiteji 3rd. Ngaleso esigabeni 4, ungabona ngeso lenyama, umdlavuza wamathumbu, izimpawu kanye ukubonakaliswa lapho udokotela abanolwazi ngokoqobo abatelekile.
Ukuze komdlavuza emathunjini amancane isetshenziswa:
• resonance kazibuthe;
Zonke lezi zindlela zisetshenziswa ukuxilonga umdlavuza emathunjini amancane. Nokho, ngezinye izikhathi odokotela akudingeki kuphela zisebenzisa ezimbalwa ukubona ngokugcwele futhi sazise isimila e komgodi ongaphakathi kwamathumbu.
Wokwelapha isifo somdlavuza encane amathumbu
Ethandwa kakhulu ngempumelelo endleleni ukuze silwe umdlavuza namanje kubhekwa ukuhlinzwa. Okwakuhlalwa kuzo lapho kusaqalwa ukuhlinzwa ngempumelelo elwisana sifo izinga okusinda kakhulu.
Ngezinye izigaba kamuva ngaphezu imisebenzi edingekayo ngaphezulu, ngelashwa nangemithi, esakhiwa ukwethulwa izidakamizwa ezahlukene isiguli e i umzimba by imijovo noma emthanjeni. Ukwelashwa ngamakhemikhali nokushiswa suppresses cell ukukhula benenkinga ukwanda kwabo.
Ngezinye izikhathi asetshenziswa futhi ukwelashwa ngemisebe, okungase isinyathelo ngqo esakhiweni se-umdlavuza. Indlela sici ukuthi emisebeni enemisebe uma bengenakuwubulala amangqamuzana omdlavuza, lokhu kuyabathinta nomthelela omubi kakhulu.
Lezi zindlela ezimbili Ziningi side effects, okwaba nomthelela ezigulini. Noma kunjalo, unelungelo akhona futhi kusetshenziswa kakhulu e-imithi yesimanje.
Muva nje kabanzi ikhangiswe izimali kazwelonke ekulweni nomdlavuza. Sicela uqaphele ukuthi lokhu ukukhwabanisa okumsulwa, nokuthatha ezinye amakhambi, wena nje udlale ngesikhathi ngokuhlala. Nge umdlavuza kufanele walwa esebenzisa imithi esemthethweni. Indlela eyodwa ngeke uqiniseke yokuphathwa lesifanele.
Ngeshwa, izimpawu umdlavuza wamathumbu e abesifazane akuqinisekile kakhulu, kodwa, njengoba kushiwo ngaphambili, uphawu njalo kakhulu futhi ekuqaleni lesi sifo - ukuphaphatheka isikhumba. Ngakho-ke, ngisho noma indisposition olunjalo oluncane kufanele usheshe uye kudokotela. Khumbula ukuthi ukuhlonza nokwelapha umdlavuza e zisaqala kuba lula kakhulu kunokuthi ngemva isifo wathuthukela lapho kungayi lubuyayo.
Iziguli esingelapheki - ke ... Izici ukunakekelwa okuthuthukisa for iziguli esingelapheki
Zendlala Yesinye Umdlavuza Izimpawu kanye Izimbangela
Kuphi eholidini ebusika? Lapho kuba efudumele, agqamile ukhululekile?
Ukuthuthukiswa mix ukumaketha
Ngingayisebenzisa i-Tamiflu kubantwana? Ukwelashwa okuphumelelayo komkhuhlane
Kangaroo inyama: izakhiwo ewusizo, ukubaluleka calorific ka